८ श्रावण २०७१, बिहीबार ०९:२५	0 100
८ श्रावण २०७१, बिहीबार ०९:२५	0 160
१० असार २०७१, मंगलवार ०९:३२	0 321
१० असार २०७१, मंगलवार ०९:२५	0 178
१० असार २०७१, मंगलवार ०९:२४	0 87
१० जेष्ठ २०७१, शनिबार ०९:२४	0 122
१० जेष्ठ २०७१, शनिबार ०९:२३	0 141
११ बैशाख २०७१, बिहीबार ०९:२२	0 136
११ बैशाख २०७१, बिहीबार ०९:२१	0 166
१७ माघ २०७०, शुक्रबार ०६:४२	0 763
स्मार्टफोन, आम मानिसको आवश्यकताको साधन बनिसकेको छ। यतिखेर नेपालमा मात्र २० लाख भन्दा माथि स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान गरिएको छ। यद्यपी यो संख्या नै वास्तविकता नहुन पनि सक्छ। स्मार्टफोनको प्रयोगबाट आम दैनिकी पनि स्मार्ट बनेको छ। घर र कार्यालय बीचको दूरी मेटाइदिएको छ स्मार्टफोनले। स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर धेरैले कार्यालय र व्यवसायिक कामहरु पनि गर्ने गर्दछन्। जसका कारण स्मार्टफोनको सुरक्षामा ध्यान दिनु पनि आवश्यक भइसकेको छ। तपाइँका गोप्य सूचना र जानकारीहरु स्मार्टफोन हराउँदा वा कार्याल, घरमा छोडेको अवस्थामा अरुको पहुँचमा नपुगोस् भन्नका लागि स्मार्टफोनलाई सुरक्षित राख्न यस्ता पाँच तरिका छन् जो निशुल्क र सजिलै अपनाउन सकिन्छ।
१५ पुष २०७०, सोमबार ०८:३१	0 556
२ पुष २०७०, मंगलवार ०७:२५	0 560
फेसबुक, वास्तविक जिवनमा लाइफ बुक बनिसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा चर्चित, लोकप्रिय यो सामाजिक सञ्जालमा दैनिक करोडौं मानिसहरु लगइन गर्छन् भने सयौंले आफ्नो एकाउन्ट बन्द पनि। अरुको नाममा फेक फेसबुक एकाउन्ट र पेज खोल्नेहरुका लागि त यस्ता एकाउन्टको इमेल आइडी बिर्सनु सामान्य कुरा नै हो। तर तपाइँलाई फेसबुक एकाउन्ट चलाउँदाको इमेल आइडी याद छैन भने पनि तपाइँले फेसबुकको आफ्नो एकाउन्ट एक्सेस गर्न (खोल्न) सक्नुहुन्छ। त्यसो त फेसबुक चलाउनका लागि इमेल नै आवश्यक पर्दछ भन्ने छैन।
३ मंसिर २०७०, सोमबार ०८:३२	0 447
गुगल, तपाइँको मनमा उब्जेका प्रश्नको जवाफ दिने वेबसाइट भने हुन्छ यसलाई। हुन पनि इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगल मनचिन्ते झोली जस्तो छ। जसले जे खोजे पनि मिल्ने। नेपालमा इन्टरनेट चलाउनेहरु अधिकांशको होम पेजका रुपमा नै गुगल सेट भएको हुन्छ। गुगल र फेसबुकको प्रयोग इन्टरनेट कनेक्सन जाँच्नका लागि समेत प्रयोग हुन्छ। गुगल एउटा र्सच इन्जिन मात्र होइन तपाइँ हामीले यसका विभिन्न सेवाहरु प्रयोग गरिरहेका छौं। इमेज, सामाजिक सञ्जाल, निशुल्क सफ्टवेयरहरु, एनालिटिक्स, विज्ञापन सेवा यस्ता अनेकन सेवा छन्। यी सबै भन्दा बढि चर्चामा रहेको र लोकप्रिय सेवा चाहिँ खोज्ने (र्सच) नै हो। मनमा निस्केका हरेक प्रश्न जवाफका लागि कसैलाई सोधिन्छ भने पहिलो गुगल नै पर्छ।
२५ कार्तिक २०७०, सोमबार १०:१६	0 396
कम्प्युटर चलाउनु भएकाहरुले कम्प्युटरको हार्ड डिस्क, पेनड्राइभ अनि मेमोरी कार्डहरुमा विभिन्न समस्या भोगिरहनुभएको होला। हामीले चलाउँदा विभिन्न सफ्टवेयरहरुको गलत प्रयोग, भाइरस साथै भौतिक क्षतीका कारण पनि कम्प्युटरमा प्रयोग हुने डिस्कहरुमा समस्या देखिन्छ। तपाइँले कम्प्युटरका वा डिस्कमा क्लिक गर्दा तथा पेनड्राइभ मेमोरीकार्डहरु कम्प्युटरमा खोल्न खोज्दा The disk in drive F is not formatted. भन्ने खालको सन्देश पाउनुभएको होला। कतिले त मेमोरीकार्ड र पेनड्राइभ नखुलेर सबै फाइल गुम्ने गरी फर्म्याट पनि गर्नुभएको होला
फेसबुक खोलेपिच्छे एसएमएस
२२ कार्तिक २०७०, शुक्रबार २०:१३	0 395
फेसबुक आम मानिस जोडिने, भेटिने सार्वजनिक मञ्च बनिसकेको छ। पुराना र स्कुले उमेरपछि छुटेका साथी देखी नयाँ नयाँ साथी बनाउने माध्यम बनेको छ यो सामाजिक सञ्जाल। यो सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता विश्वभर उत्तिकै छ। नेपालमा नहुने त झन कुरै भएन। यसको लोकप्रियता एलेक्सा वा कुनै अरु एनालिटिक्स वेबसाइटले देखाउनै पर्दैन मानिस इन्टरनेटको कनेक्सन जाँच्न यसको प्रयोग गर्छन्। आम दैनिकीको अहम हिस्सा बनिसकेको छ फेसबुक। मानिसहरु मनमा फुरेका कुरा सबै फेसबुकमा उदाँगो पार्छन्। त्यसैले त यसलाई मानिसको मनोविज्ञान जान्ने माध्यमका रुपमा पनि लिन थालिएको छ। व्यवसायिक लाभका लागि लक्षित उपभोक्ताका आवश्यकता, मानसिकता साथै दैनिक गतिविधि बारेका सूचना एकमुष्ठ रुपमा पाइने माध्यम बनेको छ यो सामाजिक सञ्जाल। यसमा आवद्ध भएकाहरुका बारेको सूचना र जानकारी हासिल गर्न धेरैले यसको सुरक्षित डाटा चोर्नका लागि साइबर आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्।
१३ कार्तिक २०७०, बुधबार १४:३९	0 432
सामाजिक सञ्जाल, यतिखेर इन्टरनेटमा कसैको व्यवसाय चलेको छ भने त्यो यसैको हो। फेसबुकको सिको गरेर नेपालका केही युवाले मात्र होइन विश्वभर फेसबुक जस्तै सामाजिक सञ्जालको निर्माण गर्ने क्रम चलिरहेको छ। पेशा, क्षेत्र, भाषा, धर्म लगायतका विषयलाई केन्द्रमा राखेर फरक फरक खालका सामाजिक सञ्जाल बनाउने क्रम विश्वभर चलिरहेको छ। यस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा तपाइँहरुले पनि आफ्नो प्रोफाइल बनाउनु भएकै होला। हाईफाइभ देखी बक्स अनि अम्याजन देखी आस्कएफएम ब्लगर अनि बिट्ली सम्म। यस्ता विभिन्न साइटहरुमा तपाईलाई एकाउन्ट खोल्न निक्कै सजिलो हुन्छ तर एकाउन्ट डिलिट गर्ने ठाउँ भने पत्ता लगाउन गाह्रो नै हुन्छ। धेरै वेबसाइटहरुले त डिलिट गर्ने स्थान नै लुकाएर राखेका हुन्छन्। किनभने कुनै पनि वेबसाइट चाहँदैनन् कि वेबसाइटमा आएका मानिसहरु फिर्ता जाउन्। किनभने त्यसले उनीहरुको व्यवसायमा घाटा पर्छ।
पटक पटक हृयाङ हुन्छ मोबाइल?
१२ कार्तिक २०७०, मंगलवार १३:३३	0 434
मोबाइल बोक्नेहरुका लागि पटक पटक मोबाइल हृयाङ हुनु हैरानीको कुरा हो। यसखालको समस्या तपाइँले पनि भोगिरहनु भएको होला। विभिन्न एप्लिकेसनहरु चलाइरहेको समयमा मोबाइल अचानक हृयाङ हुन्छ। अनि यसखालको हृयाङ हुने क्रम पटक पटक दोहोरिन्छ। यसले तपाइँलाई हैरान गराउँछ। मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउँदा अनि फोन गरिरहेको समयमा पनि मोबाइल हृयाङ भएर हैरान गराउँछ। स्मार्टफोनमा यसखालको हैरानीको कारण हो मोबाइलको आन्तरिक मेमोरी र रयाम कम हुनु। जसले गर्दा ठूला आकारका धेरै ग्राफिक भएका एप्लिकेसनहरु चलाउँदा मोबाइल हृयाङ हुन्छ। यदी तपाइँको मोबाइल समय समयमा हृयाङ हुन थालेको छ भने जान्नुहोस् त्यसको मेमोरी र रयाम तपाइँको आवश्यकता भन्दा धेरै कम छ।
११ कार्तिक २०७०, सोमबार ११:४०	0 688
यूट्यूब वा अन्य वेबसाइटका भिडियो डाउनलोडका लागि फरक फरक ब्राउजरमा अनेकन एडअन तथा भिडियो म्यानेजर राख्नुभएको छ। वा त्यस्ता एडअन्सका कारण ब्राउजर ढिलो भएको अनुभव गर्नुभएको छ भने त्यसको विकल्प छ
यसरी चलाऔं स्काइ प्रो
२१ आश्विन २०७०, सोमबार १९:३४	0 379
स्काइ प्रो, नेपाल टेलिकमले उच्च गतिको वायरलेस इन्टरनेट सेवा भनेर बेचिरहेको सीडीएमए थ्रीजी अर्थात् इभिडियो। आइपीसीडीएमए भनिने यो सेवाको नेटवर्क ग्रामिण क्षेत्रमा समेत उपलब्धछ। दशैं साथै चुनावका लागि गाउँ जानेका लागि उपयुक्त मानिएको यो चलाउन सिक्नुहोस यसरी...
यसमा ध्यान दिऔं सस्ता स्मार्टफोन किन्दा
३ आश्विन २०७०, बिहीबार १७:०४	0 429
स्मार्टफोन, भारत र चिनको बजारले गर्दा नेपालीका लागि पनि सस्तो साधन बनिसकेको छ। बजारमा धेरै यस्ता सस्ता स्मार्टफोनका ब्राण्डहरु उपलब्ध छन्। 'सस्तो बेसा पेट लागि मर' नहोस् भन्ने चाहनेहो भने यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
यसरी हटाउनुस् एनसेलको पीआरबीटी
२ आश्विन २०७०, बुधबार १६:५८	0 375
पीआरबीटी अर्थात् पर्सनल रिङब्याक टोन। एनसेलको मोबाइल लिनुभएकाहरुका लागि यो परिचित सेवा नै हो। यो सेवा मार्फत तपाइँले आफूलाई फोन गर्ने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो रुचि अनुसारका गीतहरु सुनाउन सक्नुहुन्छ।
१९ भाद्र २०७०, बुधबार ११:१२	0 456
एनसेल कनेक्ट चलाइरहनु भएकाहरुलाई एनसेलको डाटा प्याकेज महँगो लागेको र नेपाल टेलिकमको सेवा सुध्रिएर राम्रो भएको अवस्थामा सोही एनसेल कनेक्टको डाटाकार्डलाई प्रयोग गरेर नै टेलिकमको थ्रीजी चलाउन सकिन्छ। अर्को डाटाकार्ड किन्नुपर्दैन।
१० भाद्र २०७०, सोमबार १३:४२	0 417
स्क्यान गरेका डकुमेन्ट तथा प्रिन्ट गरेर नै दिएका पेजहरुलाई डिजिटल रुपमा रुपान्तरण गर्नका लागि टाइप गर्न लाग्नुभएको छ भने पख्नुहोस् तपाइँले टाइप नगरी फोटोको रुपमा पाएका त्यसखालका डकुमेन्टलाई अक्षमा नै बदल्न सक्नुहुन्छ।
२५ श्रावण २०७०, शुक्रबार ०८:५७	0 372
ल्यापटप, काखमा राखेर चलाउन सकिने सानो आकारको कम्प्युटर यसलाई काखे कम्प्युटर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। कामकाजी व्यक्तिका लागि अति नै आवश्यक साधन हो यो। साना आकारका कम्प्युटर उपकरण जति नै सुविधा...
सित्तैंको एन्टीभाइरस, माइक्रोसफ्ट इसेन्सियल्स
२० श्रावण २०७०, आईतवार १३:३५	0 410
एन्टीभाइरस तपाइँ हामी सबै आफ्नो कम्प्युटरमा यो वर्गको सफ्टवेयर राख्न छुटाउँदैनौं। फरक कुन कम्पनी र ब्राण्डको भन्ने मात्र हो। कम्प्युटरमा इन्टरनेट तथा विभिन्न खालका जोड्न, हटाउन सकिने भण्डारण यन्त्र